မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း, ဇီဝဗေဒ - ဇီဝဗေဒ. ဇီဝဗေဒ ၌, မျိုးရိ
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း, ဇီဝဗေဒ - ဇီဝဗေဒ. ဇီဝဗေဒ ၌, မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း-တဆိုနမီသည် ဂရိစကားမှဆင်းသက်လာပြီး ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအုပ်စု၊သက်ရှိများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အခြေ ..
ဇီဝဗေဒ ၌, မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း-တဆိုနမီသည် ဂရိစကားမှဆင်းသက်လာပြီး ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအုပ်စု၊သက်ရှိများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အခြေခံပေါ်ခွဲခြားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုပါသည်။ သက်ရှိများကို တဆို အဖြစ်သို့အုပ်စုဖွဲ့ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ပေးထားသောအဆင့်ရှိအုပ်စုများကိုအဆင့်မြင့်ရာထူးအဆင့်မြင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် စုစည်း၍ ဖန်တီးနိုင်သည်။ ခေတ်သစ်အသုံးပြုမှုတွင်အဓိကရာထူးများမှာ ဒိုမိန်း ၊ နိုင်ငံ ၊ ဖီလစ် ၊ မျိုးပေါင်း ၊ မျိုးစဉ် ၊ မျိုးရင်း ၊ မျိုးစု နှင့် မျိုးစိတ်များ ဖြစ်သည်။ ဆွီဒင်ရုက္ခဗေဒပညာရှင် ကားလ် လင်းနီးယပ် သည်လက်ရှိ taxonomy စနစ်ကိုတည်ထောင်သူအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ သူသည်သက်ရှိများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားရန် Linnaean taxonomy နှင့်သက်ရှိများကိုအမည်ပေးခြင်းအတွက် binomial nomenclature ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ပိုင်လိုနက်တစ် ၊ ကလဒစ္စတစ် နှင့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာမှုနယ်ပယ်များပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် Linnaean system သည်သက်ရှိနှင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းသက်ရှိများအကြား ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးအပေါ် အခြေခံ၍ ခေတ်သစ်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြားမှုစနစ်သို့တိုးတက်ခဲ့သည်။
တဆိုနမီ၏ အဓိပ္ပာယ်အတိအကျမှာအရင်းအမြစ်နှင့်ရင်းမြစ်ကွဲပြားသည်။ သို့သော်စည်းမျဉ်း၏အဓိကအချက်မှာသက်ရှိများ၏အုပ်စုဖွဲ့မှု၊ နာမည်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းချက်အနေဖြင့်လတ်တလော တဆိုနမီ ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
"စနစ်တကျ လေ့လာမှုများ phylogeny ကနှစ်လိုဖွယ်ရှိသော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဖြစ်စာရင်းဝင် taxonomy ၏ပိုအားလုံးပါဝင်နိုင်သောလယ်၏အခွဲခြားနှင့်အမည်များသို့ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်တဲ့ပုံစံပေးဖို့".
ဖော်ပြချက်, ဖော်ထုတ်ခြင်း, nomenclature နှင့်ခွဲခြားလွှမ်းခြုံသောသိပ္ပံနယ်ပယ် နှင့် စနစ်ကျ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း.
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကိုမျိုးစိတ်များအဖြစ်စုစည်းခြင်း၊ မျိုးစိတ်များကိုကြီးမားသောအုပ်စုများဖွဲ့ခြင်းနှင့်ထိုအုပ်စုများကိုနာမည်ပေးခြင်းပေးခြင်း၏သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်သည်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။.
မတူညီသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် taxonomy ကိုစနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၂ အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိုဆက်နွယ်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၆ ကိုပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးအနှုန်းနှစ်ခုကိုအဓိပ္ပာယ်တူညီညွတ်မှုဟုယူဆပုံရခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ nomenclature သည် taxonomy အဓိပ္ပာယ် ၁ နှင့် ၂ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လား၊ သို့မဟုတ် taxonomy ပြင်ပတွင်စနစ်တကျရှိမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိသည်။: ဥပမာအားဖြင့်, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်6အရပ်တို့ကိုအပြင်ဘက် taxonomy nomenclature ကြောင့်စနစ်တကျ၏အောက်ပါချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်အတူတွဲနေသည်
စနစ်များ - "သက်ရှိများ၏အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ၎င်းတို့၏သဘာဝဆက်နွယ်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် taxa များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းအပါအဝင်သက်ရှိများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊.
taxonomy အပါအဝင်အသုံးအနှုန်းများတစ်ပြင်လုံးကို set ကို စနစ်တကျဇီဝဗေဒ, စနစ်တကျ, biosystematics, သိပ္ပံနည်းကျခွဲခြား, ဇီဝဗေဒခွဲခြားနှင့် phylogenetics အနည်းငယ်ကွဲပြားတစ်ခါတစ်ရံ, တခါတရံတူညီပေမယ့်အမြဲ related နှင့်ပျထှေးသော - အချိန်များတွင်အဓိပ္ပါယ်များထပ်ရတယ်။ "taxonomy"၏အကျယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုဤနေရာတွင်အသုံးပြုထားသည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းကို ၁၈၁၃ တွင် de Candolle ၏ Théorieélémentaire de la botanique တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
1.1. အဓိပ္ပါယ် Monograph နှင့် taxonomic တည်းဖြတ်မူ
တစ် ဦး က taxonomic တည်းဖြတ်မူ သို့မဟုတ် taxonomic ပြန်လည်သုံးသပ် တစ် ဦး အထူးသဖြင့် taxon အတွက်အပြောင်းအလဲပုံစံများတစ်ဝတ္ထုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိုကဲ့သို့သော morphological, ခန္ဓာဗေဒ, palynological, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရရှိနိုင်ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်၏အခြေခံပေါ်မှာကွပ်မျက်နိုင်ပါသည်။ monograph တစ်ခုသို့မဟုတ် full revision သည် taxon အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်အချက်အလက်များအတွက်ပြည့်စုံသောပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်မှုများကို၎င်းတို့ရရှိနိုင်သောအက္ခရာအချို့ကိုသာ သုံး၍ သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောနေရာအကျယ်အဝန်းရှိနိုင်သည်ဟူသောသဘောမျိုးဖြင့်ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသည်လေ့လာမှုပြုလုပ်နေသည့် taxon အတွင်းရှိ subtaxa အကြားရှိဆက်သွယ်မှုအသစ်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုသို့မဟုတ်အသစ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည် subtaxa ၏ခွဲခြားခြင်း၊ subtaxa အသစ်၏သတ်မှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယခင် subtaxa ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
1.2. အဓိပ္ပါယ် Alpha နှင့် beta ကို taxonomy
taxa အထူးသဖြင့်မျိုးစိတ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းနှင့်အမည်ပေးခြင်း၏စည်းကမ်းကိုရည်ညွှန်းရန် "alpha taxonomy "ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုယနေ့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အစောပိုင်းစာပေများတွင်အသုံးအနှုန်းသည် ၁၉ ရာစုအကုန်အထိ morphological taxonomy နှင့်သုတေသနထုတ်ကုန်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဝီလျံဘာထရန် Turrill သည် "alpha taxonomy"ဟူသောဝေါဟာရကို ၁၉၃၅ နှင့် ၁၉၃၇ တွင်ထုတ်ဝေသောစာတမ်းများတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
. taxonomists များအကြားသူတို့၏ပြproblemsနာများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်များမှစဉ်းစားရန်၊ သူတို့၏ cytological, ecological နှင့် genetics လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုစုံစမ်းရန်နှင့်သူတို့၏ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်နည်းလမ်းများသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ Turrill 1935 ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော taxonomy အဟောင်းကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပေါ် အခြေခံ၍ လက်ခံခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အဆင်ပြေစွာသတ်မှတ်ထားသော "alpha"ကို အခြေခံ၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တည်ဆောက်ထားသည့်ဝေးလံသောဝေးလံခေါင်သီသောစနစ်ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အပိုင်းခွဲ၊ မျိုးစိတ်နှင့်အခြား taxonomic အုပ်စုများ၏အပြုအမူနှင့်သွယ်ဝိုက်။ သက်ဆိုင်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနှင့်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်နေရာကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ စံနမူနာကောင်းများကိုမည်သည့်အခါကမျှလုံးဝအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ကြီးမားသောတန်ဖိုးရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် "အိုမီဂါ"taxonomy ၏အချို့သော၊ မရေရာသည့်စံပြစံနှုန်းရှိလျှင်ဂရိအက္ခရာကိုအနည်းငယ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲကအချို့သည်ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် "beta"ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူနေသည်ဟုထင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် Turrill သည် alpha taxonomy မှဂေဟဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် cytology စသည့် taxonomy များတွင်ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးကိုအတိအလင်းချန်လှပ်ထားသည်။ သူသည် phylogenetic ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကို alpha taxonomy စစ။ မှထပ်မံချန်လှပ်ထားသည်။ 365-366) ။ နောက်ပိုင်းတွင်စာရေးသူများအနေဖြင့်တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ကို သုံး၍ မျိုးစိတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း မျိုးကွဲများသို့မဟုတ်အခြားရာထူးများအရ taxa များမပါ ကို အသုံးပြု၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်နည်းစနစ်များကို သုံး၍ ခေတ်မီကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် Ernst Mayr က "beta taxonomy "ကိုမျိုးစိတ်များထက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
မျိုးကွဲများ၏ဇီဝဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆက်စပ်မျိုးစိတ်များ၏အုပ်စုများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇာစ်မြစ်ကိုနားလည်ခြင်းသည် taxonomic လုပ်ဆောင်မှု၏ဒုတိယအဆင့်၊ မျိုးစိတ်များကိုဆွေမျိုးသားချင်းများ "taxa"အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းအတွက်အစီအစဉ်များအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအမျိုးအစားများ။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုဟူသောဝေါဟာရကိုခွဲခြားရည်ညွှန်းသည်အရာဖြစ်တယ်, ၎င်းကို "beta taxonomy"အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
1.3. အဓိပ္ပါယ် Microtaxonomy နှင့် macrotaxonomy
သက်ရှိအုပ်စုတစ်စုတွင်မျိုးစိတ်များကိုမည်သို့သတ်မှတ်သင့်သည်ကိုလက်တွေ့ပြandနာများနှင့် မျိုးစိတ်ပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မျိုးစိတ်များကိုမည်သို့သတ်မှတ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်ကိုမိုက်ကရိုတက္ကနိုဟုခေါ်သည်။ တိုးချဲ့အားဖြင့်, macrotaxonomy မျိုးစိတ်ထက် subgenus နှင့်အထက်မြင့်မားသော taxonomic ရာထူး မှာအုပ်စုများ၏လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
taxonomic သမိုင်း၏ဖော်ပြချက်အချို့သည်ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုများသို့ taxonomy ကိုသတ်မှတ်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်း ၁၈ ရာစုအထိသက်ရှိများကိုခွဲခြားရန်သိပ္ပံနည်းကျအမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းမှုမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။ အစောပိုင်းအလုပ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆေးပညာတွင်အသုံးဝင်သောအပင်များကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဒီသိပ္ပံနည်းကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှာအဆင့်များစွာရှိပါတယ်။ အစောပိုင်း taxonomy သည် Linnaeus ၏လိင်ခွဲခြားမှုစနစ်အပါအ ၀ င် "အတုစနစ်များ"ဟုခေါ်သောမတရားသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် de Jussieu 1789, de Candolle 1813 နှင့် Bentham and Hooker 1862–1863 ကဲ့သို့သောသဘာဝစနစ်များဟုရည်ညွှန်းသော taxa ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုမိုပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စနစ်များနောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားစဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အကြိုခဲ့ကြသည်။ ချားလ်စ်ဒါဝင်၏ မျိုးစိတ်များ၏မူလအစ ၁၈၅၉ ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆက်နွယ်မှုကို အခြေခံ၍ ခွဲခြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်နည်းလမ်းအသစ်များရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၈၈၃ မှ စ၍ phyletic systems ၏အယူအဆဖြစ်သည်။ ဤနည်းကို Eichler ၁၈၈၃ နှင့် Engler ၁၈၈၆ - ၁၈၉၂ တို့မှအမျိုးအစားခွဲခဲ့သည်။ မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များပေါ်ပေါက်လာမှုက မျက်မှောက်ခေတ် သင်္ချာ ဘာသာရပ် ထက်မဟုတ်ဘဲ Cladistics အပေါ် အခြေခံ၍ Phylogenetic systems ၏ခေတ်သစ်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
2.1. သမိုင်း အစောပိုင်း taxonomists
ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်အားနာမည်ပေးခြင်းနှင့်အမျိုးအစားခွဲခြင်းတို့သည်လူသားများဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုမိသားစုသို့မဟုတ်အုပ်စုရှိအခြားသူများအားသတင်းပို့နိုင်ရန်အတွက်အဆိပ်နှင့်စားသုံးနိုင်သောအပင်များနှင့်သတ္တဝါများ၏အမည်များကိုသိရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်။ c မှအီဂျစ်နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ရုံသရုပ်ဖော်ပုံများကိုတွေ့ရသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အခြေခံ taxonomy တည်ရှိခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, ဘီစီ 1500 ။
2.2. သမိုင်း ရှေးခေတ်ကာလ
Lesbos ကျွန်း တွင်နေထိုင်စဉ် Aristotle ဂရိ ၊ ဘီစီ ၃၈၄-၃၂၂ သည်သက်ရှိများကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ သူကသူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျးအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမွေးဖွားရှိခြင်းလေးခြေထောက်ရှိခြင်း, ကြက်ဥကိုတင်သော, သွေးရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်နွေး-body အဖြစ်ခေတ်မီဝေါဟာရများကို attribute တွေအတွက်သတ္တဝါခွဲခြား။ သူသည်သက်ရှိအားလုံးကိုအပင်များနှင့်သတ္တဝါများအဖြစ်နှစ်မျိုးခွဲခဲ့သည်။ သူ၏အချို့သောအုပ်စုများဖြစ်သော Anhaima သွေးမရှိသောတိရိစ္ဆာန်များ၊ ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော နှင့် Enhaima သွေးရှိတိရိစ္ဆာန်များ၊ အကြမ်းအားဖြင့် ကျောရိုး ရှိ သတ္တဝါများ ကဲ့သို့သော ငါးမန်းများ နှင့် cetaceans များ ကဲ့သို့သောအုပ်စုများသည်ယနေ့တိုင်လူအများအသုံးပြုနေကြသည်။ သူ၏ကျောင်းသား Theophrastus ဂရိ၊ ဘီစီ ၃၇၀ မှ ၂၈၅ သည်ဤအစဉ်အလာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူ၏ Historia Plantarum တွင်အပင် ၅၀၀ ခန့်နှင့်သူတို့၏အသုံးပြုမှုကို ဖော်ပြခဲ့သည် ။ ထပ်မံ၍ ယခုလက်ရှိတွင်အသိအမှတ်ပြုထားဆဲစက်ရုံအုပ်စုများဖြစ်သော Cornus, Crocus နှင့် Narcissus ကဲ့သို့သော Theophrastus ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
2.3. သမိုင်း အလယ်ခေတ်
အလယ်အလတ်ကာလ taxonomy သည်အဓိကအားဖြင့် Aristotelian စနစ် ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သတ္တ ၀ ါများ၏အတွေးအခေါ်နှင့်ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအမိန့်ကိုဖြည့်စွက်သည်။ ၎င်းတွင်အနောက်တိုင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အစဉ်အလာတွင် ပါဝင်ခြင်း ၏ မဟာကြိုးသင်း အဖြစ်အယူအဆများပါ ၀ င် သည်။ နောက်တဖန်အရစ္စတိုတယ်မှထပ်မံပေါ်ထွက်လာသည်။ Aristotelian စနစ်အချိန်တွင်ဏု၏မရှိခြင်းကြောင့် Classified စက်ရုံများသို့မဟုတ်မှို, မ သည်သူ၏အတွေးအခေါ်များဟာ scala naturae ထိုသဘာဝ Ladder နှုန်းအဖြစ်တစ်ခုတည်းစဉ်ဆက်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာကြီးကိုစီစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်အဖြစ်။ ဤသည်ကိုလည်း, ဖြစ်ခြင်း၏မဟာကွင်းဆက်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုများဖြစ်သော Procopius, Gaza of Timotheos, Demetrios Pepagomenos နှင့် Thomas Aquinas စ သည့်ပညာရှင်များက တိုးတက် ခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်တွေးခေါ်သူများသည်စိတ္တဇအတွေးအခေါ်နှင့်လက်တွေ့ကျသောအခွန်စနစ်ထက်ပိုမိုကိုက်ညီသောစိတ္တဇအတွေးအခေါ်နှင့်ယုတ္တိဗေဒအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
2.4. သမိုင်း ခေတ်ဆန်းနှင့်အစောပိုင်းခေတ်သစ်
အဆိုပါကာလအတွင်း Renaissance, ထို အကြောင်းရင်း၏အသက်အရွယ်, နှင့်ဉာဏ်အလင်း, သက်ရှိပိုပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည် categorizing, နှင့် taxonomic အကျင့်ကိုကျင့်ရှေးဟောင်းကျမ်းအစားထိုးရည်မှန်းချက်ကြီးအလုံအလောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းကိုခေတ်မီဆန်းပြားသည့်မှန်ဘီလူးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရံဖန်ရံခါအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သက်ရှိများ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကျစွာလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာတိုးတက်မှု၏အားသာချက်ကိုရယူရန်အစောဆုံးစာရေးဆရာများထဲမှတစ်ခုမှာ "ပထမဆုံး taxonomist"ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သောအီတလီဆရာဝန် Andrea Cesalpino 1519-1603 ဖြစ်သည်။ သူ၏ Magnum opus De Plantis သည် ၁၅၈၃ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအပင်မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ကျော်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူပထမ ဦး ဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့သောကြီးမားသောအပင်မိသားစု ၂ ခု Asteraceae နှင့် Brassicaceae ကိုယနေ့တိုင်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၁၇ ရာစုတွင် ဂျွန် ရေး အင်္ဂလန် ၊ ၁၆၂၇ - ၁၇၀၅ သည်အရေးကြီးသော taxonomic ဆိုင်ရာအလုပ်များကိုရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုမှာ Methodus Plantarum Nova ၁၆၈၂ ဖြစ်ပြီးသူသည်အပင်မျိုးစိတ် ၁၈၀၀၀ ကျော်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအခြိနျတှငျသူ၏အခွားအတနျးမြားသညျအခကျအခဲမြားတှငျအထကျအနကျဆုံးဖွဈသျောလညျးအခွခေံပညာရှင်တဈ ဦး ကမှထုတ်လုပ်ခဲ့သညျ၊ လာမည့်အဓိကအခွန် ဘဏ္onomicာရေးဆိုင်ရာ အလုပ်များကို ဂျိုးဇက်ပစ်တွန်ဒီ Tournefort ပြင်သစ်၊ ၁၆၅၆-၁၇၀၈ မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၇၀၀ မှသူ၏ Institutiones Rei Herbariae တွင် ၆၉၈ မျိုးဆက်မှမျိုးစိတ်ပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် Linnaeus ကိုတိုက်ရိုက်ဩဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။
2.5. သမိုင်း လင်းနိုင်းခေတ်
ဆွီဒင်ရုက္ခဗေဒပညာရှင် Carl Linnaeus ၁၇၀၇-၁၇၇၈ သည် taxonomy ခေတ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူ့အဓိကအကျင့်နှင့် Systema Naturae 1735 ခုနှစ် 1st Edition ကို, မျိုးစိတ်သစ် Plantarum 1753 ခုနှစ်, နှင့် Systema Naturae 10th Edition ကို, သူခေတ်သစ် taxonomy တော်လှန်ခြင်း။ အမှုတော်တို့ကိုတိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်မျိုးစိတ်တစ်ခုစံဒွိစုံအမည်ပေးခြင်းစနစ်, အကောင်အထည်ဖော် တစ်ဦးဖရိုဖရဲနဲ့ disorganized taxonomic စာပေမှတစ်ကြော့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သက်သေပြရာ။ သူကလူတန်းစား၊ အမိန့်၊ မျိုးစိတ်, ဒါပေမယ့်လည်းပန်းပွင့်၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြု။ အားဖြင့်, သူ့စာအုပ်ကနေအပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် Linnaean system ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၈ ရာစု၌ယနေ့ခေတ်တွင်ယနေ့တိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန် taxonomists များက Linnaeus ၏အလုပ်သည်မှန်ကန်သောအမည်များအတွက်" ၁၇၃၃ နှင့် ၁၇၅၈ အသီးသီး” အတွက်" စမှတ်” အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ ဤရက်စွဲများမတိုင်မီထုတ်ဝေသောအမည်များကို "pre-Linnaean"ဟုညွှန်းပြီးမှန်ကန်မှုမရှိဟုသတ်မှတ်သည် Svenska Spindlar တွင်ထုတ်ဝေသောပင့်ကူများ မှလွဲ၍ ။ ဤရက်စွဲများမတိုင်မီ Linnaeus ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့် taxonomic အမည်များကိုပင် Linnaean မတိုင်မီထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
Linnaeus ရိုးရှင်းစွာအလွယ်တကူသတ်မှတ် taxa ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သော်လည်း, ထိုများ၏စိတ်ကူး Linnaean taxonomy တစ်မျိုးသို့ဘာသာပြန်ဆိုအဖြစ် dendrogram တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များ၏ နိုင်ငံတို့ ကောင်းစွာမျိုးစိတ်များ၏မူလအစတွင်မတိုင်မီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်, 18 ရာစုအဆုံးဆီသို့ရေးဆွဲပြီးခဲ့သည်။ တစ်ဦး၏စိတ်ကူးရှာဖွေစူးစမ်းအစောပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်များထဲတွင် မျိုးစိတ် transmutation ခဲ့ကြသည် Erasmus ဒါဝင် s 1796 Zoönomia နှင့် Jean-Baptiste Lamarck s အတွေးအခေါ် Zoologique 1809. ၏ အဆိုပါအယူအဆဟာမှန်းဆအားဖြင့် Anglophone ကမ်ဘာပျေါတှငျခေတ်စားလာပေမယ့်ကျယ်ပြန့်ကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ် ဖန်ဆင်းခြင်း၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏ဆိုငျရာအစအနရှိရှိ ဖြင့်အမည်ဝှက်ထုတ်ဝေ ရောဘတ်ကုန်သည်များ 1844. အတွက်
ဒါဝင်သီအိုရီအရယေဘူယျအားဖြင့်လက်ခံမှုသည်ခွဲခြားခြင်းသည်ဒါဝင်၏ ဘုံမျိုးနွယ် ၏နိယာမကိုရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ကြောင်းလျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သက်ရှိများ ကိုကိုယ်စားပြုသော သစ်ပင် သည်သိပ္ပံဆိုင်ရာအလုပ်များတွင်လူကြိုက်များလာပြီးကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအုပ်စုများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဘိုးဘေးများနှင့်ချည်နှောင်ထားသောပထမ ဦး ဆုံးခေတ်သစ်အုပ်စုများထဲမှတစ်ခုမှာ ငှက်များ ဖြစ်သည်။ ဒပြီးတော့အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုသုံးပြီး Archeopteryx နှင့် Hesperornis, သောမတ်စ်ဟင်နရီ Huxley တရားဝင်အားဖြင့်အမည်ရှိအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, သူတို့ကဒိုင်နိုဆောထံမှပြောင်းလဲခဲ့ကွောငျးအသံထွက် ရစ်ချတ် Owen 1842. အတွက် ရရှိလာသောဖော်ပြချက်မှာဒိုင်နိုဆောများသည်ငှက်များ၏ဘိုးဘေးများဖြစ်လာမည့် သို့ မွေးဖွားလာခြင်းသည် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ taxonomic အတွေးအခေါ်၏မရှိမဖြစ်အရေးပါသောအရာဖြစ်သည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအုပ်စုများသည် ၁၉ နှင့် ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ပိုမိုတွေ့ရှိလာသည်နှင့်အမျှ ရှေးဟောင်း သုတေသီများကတိရိစ္ဆာန်များ၏သမိုင်းကြောင်းကိုခေတ်ကာလတစ်လျှောက်နားလည်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်း ခေတ်သစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှု ဖြင့်အဓိကအုပ်စုများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ခေတ်သစ်နားလည်မှုရှိခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ taxonomy သည် Linnaean taxonomic အဆင့်များအပေါ်အခြေခံထားသောကြောင့်ထိုအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုသည်ခေတ်မှီအသုံးပြုမှုတွင်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ cladistic နည်းလမ်း 1960 ကတည်းကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် Julian Huxley သည် clade ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ၁၉၆၀ တွင်ကာainနနှင့်ဟာရီဆန်တို့သည်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဓိကလက္ခဏာမှာအဆင့် ဆင့် ကိုလျစ်လျူရှုပြီးအဆင့် ဆင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသောအပင် တစ်ခုတွင် taxa များကိုစီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘိုးဘွားပုံစံမှဆင်းသက်လာသူအားလုံးပါ ၀ င်ပါကတက္ကစီကို monophyletic ဟုခေါ်သည်။ ၄ င်းတို့မှဆင်းသက်လာသောမျိုးဆက်များအုပ်စုများကို paraphyletic ဟုခေါ်သည်။ အသက်ပင်၏အကိုင်းအခက်တစ်ခုထက်ပိုသောအုပ်စုများကို polyphyletic ဟုခေါ်သည်။ Phylogenetic Nomenclature သို့မဟုတ် PhyloCode အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံး သည် clades ၏တရားဝင်အမည်အားထိန်းညှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ လက်ရှိအဆင့်ရာထူးကုဒ်များနှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန်ရည်ရွယ်သော PhyloCode အောက်တွင်လင်းနိုင်းရာထူးများကိုရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်။
3.1. ခေတ်သစ်ခွဲခြားစနစ် နိုင်ငံများနှင့်ဒိုမိန်းများ
လင်းနီမတိုင်မီလေးတွင်အပင်များနှင့်သတ္တဝါများကိုသီးခြားနိုင်ငံများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ Linnaeus သည်ဤအရာကိုထိပ်တန်းရာထူးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးရုပ်ဝတ္ထုကိုအပင်များ၊ သတ္တဝါများနှင့်တွင်းထွက်သတ္တဝါများအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်တိုးတက်လာခြင်းကြောင့်အဏုဇီဝသက်ရှိများကိုခွဲခြားနိုင်သဖြင့်တိုင်းပြည်အရေအတွက်တိုးများလာခဲ့ပြီးငါးနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံ ၆ ခုသည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
ဒိုမိန်း များသည်အတော်လေးအသစ်သောအုပ်စုများဖြစ်သည်။ ၁၉၇၇ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဆိုပြုခဲ့သည့် Carl Woese ၏ ဒိုမိန်းသုံးမျိုးစနစ်ကို နောက်ပိုင်းမှသာလက်ခံခဲ့သည်။ ဒိုမိန်းသုံးမျိုး၏နည်းလမ်း၏အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုမှာ Archaea နှင့် Bacteria တို့ကိုခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပြီးယခင်ကတစ်ခုတည်းသော Bacteria တစ်ခါတစ်ရံတွင် Monera ဟုလည်းခေါ်သောနိုငျငံ တွင်ဆဲလ်များ ရှိသောနျူကလိယ ပါဝင်သောသက်ရှိအားလုံးအတွက် Eukaryota နှင့်အတူခွဲခြားထားသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်အနည်းငယ်ကဆဌမမြောက် Archaea ပါ ၀ င်သော်လည်း domain method ကိုလက်မခံကြပါ။
ပရိုတက်စတင့် အမျိုးအစားများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်ဝေသော Thomas Cavalier-Smith က Neomura သည် Archaea နှင့် Eucarya တို့ကိုအတူတကွစုစည်းထားသော Clade သည် Actinobacteria မှ Bacteria မှဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာလိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကအဆိုပြုထားသည်။ မိမိအ 2004 ခွဲခြားအဆိုပါကုသ archaeobacteria သူလုံးဝသုံးဒိုမိန်းစနစ်ကပယ်ချခဲ့, နိုင်ငံတော်သို့ဗက်တီးရီးယားပိုးတစ်ခု subkingdom ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဆိုလိုသည်မှာ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Stefan Luketa က" dominion ” စနစ် ၅ ခုကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။ Prionobiota acellular နှင့် nucleic acid မပါဘဲ နှင့် Virusobiota acellular သို့သော် nucleic acid တို့သည်ရိုးရာဒိုမိန်းသုံးခုကိုပေါင်းထည့်သည်။
3.2. ခေတ်သစ်ခွဲခြားစနစ် မကြာမီကပြည့်စုံသောအမျိုးအစားများ
အချို့သောသက်ရှိအုပ်စုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များရရှိလာသည်နှင့်အမျှပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်း၊ သို့သော်ဘဝအများစုသို့မဟုတ်အားလုံး၏ပြည့်စုံသောကုသမှုများသည်ရှားပါးသည်။ မကြာသေးမီကဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သော Adl et al ။, 2012 သည်ဆန္ဒပြသူများကိုသာအလေးပေးသော eukaryotes များကိုဖုံးကွယ်ထားသည့် Ruggiero et al ။, 2015, eukaryotes နှင့် prokaryotes နှစ်ခုလုံးကို Order အဆင့်သို့လွှမ်းခြုံခဲ့သည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုယ်စားလှယ်များဖယ်ထုတ်။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ taxonomy သည် ဇီဝဗေဒ ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်အားထက်သန်သော သဘာဝသမား များသည် taxa အသစ်များထုတ်ဝေရာတွင်မကြာခဏပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့် "taxonomists"ဟုသိကြသောဇီဝဗေဒပညာရှင်များကလေ့ကျင့်ကြသည်။ taxonomy သည် ဘဝကို ဖော်ပြရန်နှင့်စုစည်းရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့် taxonomists မှလုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ နှင့်ရရှိလာမည့် ထိန်းသိမ်းရေးဇီဝဗေဒ နယ်ပယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
4.1. လျှောက်လွှာ သက်ရှိအမျိုးအစားခွဲခြား
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်မှုသည် taxonomic ဖြစ်စဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အသုံးပြုသူအားတက္ကစီ၏ဆွေမျိုးများကမည်သို့ယူဆသည်ကိုအသိပေးသည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်မှုသည်အခွန်အတုတ်အဆင့်များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းမှအနည်းဆုံးအထိအားလုံးပါဝင်နိုင်ရန် Domain, Kingdom, Phumum, Class, Order, Family, Genus, Species နှင့် Strain ဖြစ်သည်။
taxon ၏ "အဓိပ္ပါယ်"ကို၎င်း၏ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်၎င်း၏ရောဂါသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် encapsulated ဖြစ်ပါတယ်။ taxa ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိပါ။ သို့သော် taxa အသစ်များကိုအမည်ပေးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်သည်။ ခုနှစ်တွင် သတ္တဗေဒ, အ nomenclature ပိုမိုလေ့အသုံးပြုရာထူး များအတွက် superfamily မှ subspecies, ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် သတ္တဗေဒ Nomenclature အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ICZN Code ကို ။ ဒနယ်ပယ်များတွင် ရုက္ခဗေဒ, phycology နှင့် mycology, taxa ၏အမည်ကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည် ရေညှိ, မှိုများနှင့်အပင်များအတွက် Nomenclature အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ICN ။
နာမည်သည်ထူးခြားရမည် ဆိုလိုသည်မှာ homonym မဟုတ်ပါ.
အဆိုပါ taxon လက်တင်အက္ခရာ က၏ 26 အက္ခရာများပေါ်တွင် အခြေခံ. အမည်ပေးထားရမည်ဖြစ်သည် ဒွိစုံ မျိုးစိတ်အသစ်အဘို့, သို့မဟုတ်အခြားရာထူးများအတွက် uninomial ။.
အခွန်ကောက်ခံမှုကိုဖော်ပြရန် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် သို့မဟုတ်အခြားအငှားယာဉ်များနှင့်ခွဲခြားရန်သင့်လျော်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ပြန်ချက်များပါ ၀ င်သင့်သည် ရောဂါ၊ ICZN Code ၊ အပိုဒ် ၁၃.၁.၁၊ ICN ၊ အပိုဒ် ၃၈ ။ ကုဒ်နှစ်မျိုးလုံးသည်တက္ကစီ ယင်း၏အ ကန့်အသတ် ရှိသည့်အကြောင်းအရာကို၎င်း၏အမည်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းမှတမင်တကာသီးခြားခွဲထုတ်သည်။.
ဖော်ပြချက်သည်အနည်းဆုံးအမည်ပါသည့် အမျိုးအစား နမူနာတစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံရမည်။.
ဤပထမလိုအပ်ချက် ၄ ခုသည်ထာဝရသိပ္ပံဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။.
သို့သော်မကြာခဏအချက်အလက်များပိုမိုများပြားလာသည်။ တက္ကစီ၏ပထဝီအနေအထား၊ ဂေဟစနစ်၊ ဓာတုဗေဒ၊ သုတေသီများသည် ၄ င်းတို့၏အခွန်အခများအပေါ်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုသည်မှာရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များနှင့်အရင်းအမြစ်များပေါ် မူတည်၍ နည်းစနစ်များသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အရည်အသွေး နှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်မှုများမှကွဲပြားခြားနားသော DNA sequence data ပမာဏ၏ကွန်ပျူတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအသေးစိတ်အထိဖြစ်သည်။
4.2. လျှောက်လွှာ စာရေးသူကိုးကား
"အခွင့်အာဏာ"သိပ္ပံနည်းကျနာမကိုအမှီပြီးနောက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ အခွင့်အာဏာသည်သိပ္ပံပညာရှင်သို့မဟုတ်အမည်ကိုပထမဆုံးတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သောသိပ္ပံပညာရှင်များ၏အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၇၅၈ ခုနှစ်တွင် Linnaeus သည် အာရှဆင် အား Elephas maximus အားသိပ္ပံပညာကိုပေးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင် Elephas maximus Linnaeus, 1758 ဟုရေးသားခဲ့သည်။ စာရေးသူများ၏အမည်များကိုမကြာခဏအတိုကောက် အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ Linnaeus အတွက် L. အတိုကောက်ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသည်။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောအတိုကောက်အမျိုးအစားများရှိသည် စာရေးသူအတိုကောက်အားဖြင့်ရုက္ခဗေဒပညာရှင်စာရင်းကို ကြည့် ပါ ။ အာဏာပိုင်များကိုသတ်မှတ်ပေးသောစနစ်သည် ရုက္ခဗေဒ နှင့် သတ္တဗေဒ အကြားအနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ သို့သော်မျိုးစိတ်တစ်ခု၏ genus သည်မူလဖော်ပြချက်မှ စ၍ ပြောင်းလဲသွားပါကမူလအခွင့်အာဏာ၏အမည်ကိုကွင်းကွင်း၌နေရာချသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် taximetrics, သို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်း taxonomy အဖြစ်လူသိများ phenetics အတွက်, သက်ရှိမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ phylogeny သို့မဟုတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆက်ဆံရေး၏, ခြုံငုံတူညီအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားထားပါသည်။ ဒါဟာ taxa အကြားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် "အကွာအဝေး"၏အတိုင်းအတာအတွက်ရလဒ်။ Phenetic နည်းလမ်းများသည်မျက်မှောက်ခေတ်တွင်အတော်လေးရှားပါးလာသည်။ များသောအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အစားထိုးခြင်း၊ phenetic နည်းလမ်းများသည်ဘုံဘိုးဘွား သို့မဟုတ် plesiomorphic စရိုက်များကိုဘုံ သို့မဟုတ် apomorphic အသစ်များမှခွဲခြားခြင်းမပြုပါ။ သို့သော် အိမ်နီးချင်းပူးပေါင်းခြင်း ကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာနည်းစနစ်အချို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များ ထိုကဲ့သို့သော Bayesian အခြ ကဲ့သို့သော သည်အလွန်မြင့်မားသောတွက်ချက်မှုများပြားသည့်အခါ phylogeny ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကြမ်းဖျင်းတွက်ချက်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
မျက်မှောက်ခေတ် taxonomy သည် ဒေတာဘေ့စ် နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အမျိုးအစားခွဲခြားရန်နှင့်၎င်းတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေရန်။ အများအားဖြင့်အသုံးပြုထားသောဒေတာဘေ့စ်မရှိပါကမှတ်တမ်းတင်ထားသောမျိုးစိတ်အားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်ကြိုးစားသည့် အသက်တာ ၏ ကက်တလောက် ကဲ့သို့သောပြည့်စုံသောဒေတာဘေ့စ်များရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလအထိစာရင်းပြုစုထားသောနိုင်ငံအားလုံးသည်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁.၆၄ သန်းကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာမှခန့်မှန်းထားသောခန့်မှန်းမျိုးစိတ်များ၏လေးပုံသုံးပုံကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
Wikipedia: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း (ဇီဝဗေဒ)